San Htun's Diary: June 2013
မကြာမှီ Daylight Savings ကုန်ဆုံးကာ နေထွက်နောက်ကျ နေဝင်စောတော့မည်။ ဆောင်းရာသီဆိုလျှင် အိမ်တွင်းအောင်းရပြီး နွေတုန်းလျှောက်လည်ထားမှဆိုကာ ပိတ်ရက်ဆိုလျှင် ဘယ်ကိုသွားလျှင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားကြသည်။
ဒီတပတ်တော့ ဆူနမ်က စတော်ဘယ်ရီ သွားခူးရအောင်ဟု အဆိုတင်သွင်းသည်။ ရာမားက Global Food နဲ့ H Mart မှာ သွားခူးမယ်လေဟု ကန့်ကွက်တော့ ဆူနမ်တယောက် နားရင်းအုပ်ချင်စိတ် ပေါက်သွားသည်။ Global Food နဲ့ H Mart သည် အစားအသောက်များရောင်းသည့် စူပါမားကတ်ဖြစ်သည်။ ကျွှန်ုပ်က သွားမယ်လေလို့ အပီထောက်ခံသည်။ အမ်းထရူးကို နင် စတော်ဘယ်ရီ မခူးဖူးဘူးမလား သွားရအောင်လေ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဟဟု မဲဆွယ်သည်။ (အမ်းထရူး) ငါ ကျောင်းမှာ Forest Course ယူတုန်းက စတော်ဘယ်ရီသွားခူးဖူးတယ်။ အမ် ငါတို့မခူးရပါလား။ နင်တို့က Residence Course ယူပြီး အဆောင်မှာနှပ်ကြတာကိုး။ စတော်ဘယ်ရီ သွားခူးဖူးသည့် အမ်းထရူးက ထောက်လည်းမထောက်ခံ ကန့်လည်းမကန့်ကွက် ကြားနေမဲပေးသည်။ ရာမားကို စည်းရုံးကာ သုံးမဲတွင် နှစ်မဲရသောအခါ စတော်ဘယ်ရီခူးမည့် ဆူနမ့်အဆို အောင်မြင်သွားသည်။
ကားလမ်းလေးသည် စိမ်းညှို့နေသည့် သစ်တောအုပ်ထဲတွင်ရှိကာ နံဘေးတွင် စမ်းချောင်းလေး ရစ်ခွေစီးဆင်းနေသည်။ စတော်ဘယ်ရီသည် အမှည့်မြန်သည်မို့ စတော်ဘယ်ရီခူး ရာသီချိန်သည် တပတ်၊ နှစ်ပတ်သာ ကြာသည်။ မကြာခင် ဖွင့်လှစ်မည့် ဘလူးဘယ်ရီခူးချိန်ကိုလည်း အခွင့်သင့်လျှင် လာချင်ပါသေးသည်။ ခြင်းတောင်းလေးများဝယ်ပြီး စတော်ဘယ်ရီခင်းဆီ ထရပ်ကားကြီးက ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ဒီနေ့မှ စဖွင့်သော်ငြား အခင်းထဲတွင် စတော်ဘယ်ရီခူးကြသူများဖြင့် စည်ကားနေသည်။ အလံနီလေး ကိုင်ဆောင်ထားသည့် ဂိုက်က ဒီနားကနေစပြီး နောက်ဖက်ကို ခူးသွားပါဟု ညွှန်ကြားသည်။
အမှည့်လွန်နေသည့် အသီး၊ မမှည့်သေးသည့် အသီးများကြား အရွက်စိမ်းစိမ်းဖားဖားအောက်တွင် ပုန်းနေသည့် စတော်ဘယ်ရီ နီနီသီးများကို ခူးဆွတ်ကြသည်။ စတော်ဘယ်ရီနံ့မွေးအီအီ သင်းပျံ့နေပြီး စတော်ဘယ်ရီသီးတလုံး ပါးစပ်ထဲပစ်ထည့်လိုက်သောအခါ အားပါး...ချိုလိုက်တာ ဆွေမျိုးမေ့သွားသည် း) ။ ခြင်းတောင်းထဲရောက်သည်က နည်းနည်း ဗိုက်ထဲရောက်သည်က များများ။ စတော်ဘယ်ရီခူးနေကြ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်နေကြသည့် ကလေးတွေ မြင်ရသောအခါ ဆွဲငင်အားပြင်းသည့်ဂိမ်းကို ဖြတ်ကျော်ကာ ကလေးများကို စတော်ဘယ်ရီခင်းထဲရောက်အောင် ခေါ်ဆောင်နိုင်သည့်မိဘများကို ချီးကျူးမိသည်။ မနှစ်က ဘော့စတွန် တွင် ရက်စ်ဘယ်ရီ ခူးကြသည်ကို သတိရမိသည်။ ရက်စ်ဘယ်ရီ၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ ဘလူးဘယ်ရီ မည်သည့်ဘယ်ရီပဲခူးခူး ပျော်ဖို့ကောင်းသည်မှာ သေချာသည်။
ကလယ်ရားက မေရီလန်းနှင့် ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကြား ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသည့် ပတ်တိုမတ်မြစ်ရှိသည့် ဂရိတ်ဖောပန်းခြံသို့ သွားလည်ရန် အကြံပေးသည်။ အမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးတွင်ရှိသော အမျိုးသားပန်းခြံအားလုံးကို တနှစ်တာဝင်ရောက်ခွင့်လက်မှတ် ဝယ်ထားသည်မို့ ဂရိတ်ဖောသွားမည်ဆိုလျှင် သူ့လက်မှတ်သုံးရန် ကလယ်ရားက ပေးလိုက်သည်။ ပျော်ပွဲစားထွက်ကြသည့် မိသားစုများ၊ တောင်တက်ကြသူများ ခွေးကျောင်းကြသူများ၊ လမ်းလျှောက်ကြသူများဖြင့် စည်ကားနေသည်။ တောင်သည် စိမ်းညှို့နေပြီး နေပျောက်ပင်မထိုး။ စကားသံကြောင့် သိမ်းငှက်တကောင် ထပျံသွားသည်။ အန္တရာယ်မပေးမှန်း သိလို့လားမသိ ဝေးဝေးမပြေး။ ဆယ်မိနစ်ခန့် တောင်တက်ပြီး မောဟိုက်လာသောအခါ မြစ်တလျှောက် လမ်းလျှောက်နိုင်မည့် လမ်းကြောင်းက ပိုကာင်းသည်ဟုဆိုကာ တခြားပန်းခြံဆီသို့ ကားမောင်းကာ ချီတက်ကြပြန်သည်။
ဂရိတ်ဖောပန်းခြံအတွင်း ပန်းခြံပေါင်း ၁၀ ကျော်ရှိသည်။ သည်တခါ ပန်းခြံဂိတ်တွင် အစောင့်ရှိသည်။ ဝင်ခွင့်ကဒ်နှင့်အတူ အိုင်ဒီကဒ်ပြရမည်ဟု ကဒ်တွင်ပါရှိသည်။ ဝင်ခွင့်ကဒ်တွင်ရှိသော ကလယ်ရားလက်မှတ်နှင့် အိုင်ဒီတွင်ရှိသောကျွှန်ုပ်တို့လက်မှတ် မတူ။ ထိုအခါ လက်မှတ်နှစ်မျိုးရှိသည်ဟု ညာမည်ကြံစည်ထားသည်။ ဝင်ခွင့်လက်မှတ်မရှိလျှင် ကားတစီး ငွေသားငါးကျပ်ပေးကာ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ဂိတ်တွင် ဝင်ခွင့်လတ်မှတ်နှင့် ဆူနမ့်အိုင်ဒီကဒ် ပေးသောအခါ ဂိတ်အစောင့်က အိုင်ဒီကဒ်မလိုဟုဆိုကာ ဝင်ခွင့်ကဒ်ကိုသာ အသေအချာ စစ်လေသည်။
ဂရိတ်ဖောပန်းခြံသည် အမှိုက်ပုံးကင်းသောပန်းခြံဖြစ်ပြီး မိမိအမှိုက်မိမိဘာသာသယ်ဖို့ ဆိုင်းပုဒ်များက ဆော်သြသလို အဝင်ဝတွင် ကျွှတ်ကျွှတ်အိတ်များ ထားပေးထားသည်။ အဝေးကပင် ရေစီးသံသဲ့သဲ့ ကြားရုံမျှဖြင့် အေးမြမှုကို ခံစားမိသည်။ လမ်းတလျှောက် ကျောက်ဆောင်များကြောင့် ချောမွေ့မနေ။ ကျောက်ဆောင် အတက်အဆင်းများဖြင့် သတိထားရသည်။ ငါးမျှားနေသော သမီးကြီးဖြစ်ပုံရသည့် ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေး၊ ထိုကောင်မလေး၏ မောင်ငယ်ဖြစ်ပုံရသည့် သားငယ်ကို ငါးမျှားတံလွှဲပုံ သင်ကြားနေသည့် ဖခင်၊ အအေးဘူး၊ မုန့်ထည့်ထားပုံရသည့် ဘူးကို ကိုင်ဆောင်ရင်းစောင့်နေသည့် မိခင် ကိုရီးယားမိသားစု။
ရေဆော့ကစားနေသည့် ပြာလဲ့လဲ့မျက်ဝန်းပိုင်ရှင် ဂါဝန်ဖြူဖြူ ဝတ်ဆင်ထားသည့် ရှစ်နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိ ကလေးမ၊ ကျောက်ဆောင်တခုဆီမှ တခုဆီသို့ ခုန်ပေါက်ကူးနေသည့် ငါးနှစ်အရွယ်ခန့်ကောင်လေး၊ ထိုမောင်နှမနှစ်ယောက်ကို အဝေးမှ စောင့်ကြည့်နေကာ ရေတံခွန်ကို ငေးနေတတ်သည့် ဖခင်။ ကျောက်ဆောင်တန်းမှ စီးကြနေသည့် ရေတံခွန်၊ ကျောက်ဆောင်များကြား စီးဆင်းသွားသော ဝါကျင်ကျင်မြစ်ရေ၊ ဟိုးအဝေး တောင်စောင်းဆီမှ ရေတံခွန်၊ မြစ်အလှကို အပြည့်အဝ ခံစားနိုင်သည့် အိမ်တလုံး။ ထိုအရာများကို ငေးကြည့်နေသော ကျောက်ဆောင်ပေါ်မှ ကျွှန်ုပ် တို့လေးယောက်။
ဂါဝန်ဖြူဖြူဝတ်ထားသည့် ကလေးမ ရေဆော့သည်ကို အားကျ၍ ဖိနပ်ချွှတ်ကာ ရေထဲဆင်းသောအခါ အေးမြသော ရေများတိုးဝှေ့သွားကာ အေးမြမူသည် ခြေဖဝါးမှ တကိုယ်လုံး ဖြန့်ကျက်သွားသည်။ ကျွှန်ုပ် ရေဆော့သည်ကို မြင်သောအခါ ကျန်သူများလည်း ခြေအိတ်၊ ဖိနပ်ချွှတ်ကာ ရေထဲဆင်းကြတော့သည်။ ကျောက်ဆောင်ပေါ်တွင်ထိုင်ရင်း ရေများခြေထောက်ကို တိုးဝှေ့စီးဆင်းသွားကာ ကျောက်ဆောင်များကြား တသွင်သွင်းစီးဆင်းနေသော မြစ်ရေပြင်ကို ကြည့်ရင်း မြစ်ရေစီးသံ တဝုန်းဝုန်းသံကို နားဆင်ရသည်မှာ တပတ်လုံး ပင်ပန်းနွယ်နယ်ထားသမျှ မြစ်ရေနှင့်အတူ မျောပါသွားနှင့်သလို ခံစားမိသည်။
ချိုမြနေသော စတော်ဘယ်ရီ၊ အေးစိမ့်နေသော တောတောင်၊ စိမ်းညှို့နေသော သစ်ပင်၊ အေးမြနေသော မြစ်ရေတို့က ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများကို ပြေပျောက်သွားစေကာ နောင်တွင်ရင်ဆိုင်ရမည့် အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ဖို့အားသစ်လောင်းပေးခဲ့သည်။
ဇွန် ၂၉ ၊ ၂၀၁၃။
Photos - credit to Andrew
ကလေးအရွယ် စာဖတ်တတ်ဖို့ စာဖတ်သည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် လောကကြီးကို စူးစမ်းဖို စာဖတ်သည်။
နှစ်ဆယ်ကျော်အရွယ် ဗဟုသုတတိုးဖို့ စာဖတ်သည်။
သုံးဆယ်ကျော်အရွယ် စိတ်အာဟာရအတွက် စာဖတ်သည်။
မူလတန်းကျောင်းသူအရွယ်တုန်းက အတန်းမှန်မှန်အောင်ဖို့ စာတွေ မဖတ်ချင်လည်းဖတ်၊ ဖတ်ချင်လည်း ဖတ်ရသည်။ စာရှည်ရှည်တွေကို မဖတ်နိုင်သေးသလို မျောက်ရှုံးအောင် ဆော့ကစားသဖြင့် အပြင်စာမဖတ်ဖြစ်။ အလယ်တန်းရောက်သောအခါမှ အပြင်စာများ ဖတ်ဖြစ်လာသည်။ ဇာတိမြို့လေးသည် မြို့ဆန်သည်ဟု ဆိုရမည်။ ညနေစောင်းတွင် ဆိုက်ကပ်သော ပုသိမ်သင်္ဘောနှင့်အတူ ပါလာသော အသစ်ထွက်သည့် ဝထ္ထုစာအုပ်များကို ငှားရမ်းဖို့ မိန်းမပျိုလေးများသည် ဝတ်ကောင်းစားလှ ဝတ်ဆင်ကာ ကမ်းနားဆင်းကြသည်၊ စာအုပ်ဆိုင်သွားကြသည်၊ သူူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းများနှင့် မုန့်ဆိုင်ထိုင်ကြသည်။
ဆွေမင်း ဓနုဖြူ၏ မြိုင်ရာဇာတွတ်ပီ၊ လေးမွန်၊ ထွေးမွန်၊ ကာတွန်းငွေကြည် ရုပ်ပြများကို နှစ်သက်သည်။ စာရှည်ရှည် ဖတ်နိုင်လာသောအခါ ဝထ္ထု၊ မဂ္ဂဇင်းများကို ဖတ်သည်။ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်များတွင် ဇာတိမြို့သို့ ပြန်လာသောအခါ မြို့တွင် တောသူ၊ တောတွင် မြို့သူဖြစ်၍ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်း ရှားသည်။ ထိုပျင်းရိဖွယ်ကောင်းသော နွေရက်များတွင် ဖခင်၏စာအုပ်စင်မှ စာအုပ်များကို ဖတ်ခြင်း၊ ဘေးအိမ်ရှိ စာအုပ်ဗီရိုမှ စာအုပ်များကို ငှားရမ်းဖတ်ရှုခြင်း၊ စာအုပ်ဆိုင်များမှ စာအုပ်များကို ငှားရမ်းဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် ကုန်ဆုံးစေသည်။
တမှတ်သည် တဘဝဟုဆိုကြသော ဘဝအဆုံးအဖြတ်ပေးမည့် ဆယ်တန်းကျောင်းသူဘဝတွင် ကျောင်းစာပိနေပြီး အပြင်စာ မဖတ်ခဲ့။ တက္ကသိုလ်တက်ရန် စောင့်စားရင်း တက်ခဲ့သော အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကျောင်းမှ သူငယ်ချင်းများသည် စာဖတ်အလွန်ဝါသနာပါသည်။ စာအုပ်ဆိုင်များသို့ လစဉ်သွားရောက်ကာ စာအုပ်ဝယ်ကြသည်၊ စာမြည်းကြသည်၊ ဆွေးနွေးကြသည်၊ လဲဖတ်ကြသည်။ နှစ်နှစ်ခန့်သာ သင်္ကြန်လည်ပတ်ပြီး ကျန်နှစ်များတွင် စာအုပ် ၂၀၊ ၃၀ ခန့် ငှားထားပြီး မောင်နှမနှစ်ယောက် သင်္ကြန်တတွင်းလုံး အိမ်တွင်းအောင်းကာ စာဖတ်ကြသည်။
စာဖတ်သက်ရင့်လာသည်နှင့်အမျှ စာအုပ်ကောင်းကောင်းများကို ရွေးချယ်ဖတ်တတ်လာသည်။ မြသန်းတင့်၏ လေရူးသုန်သုန်၊ ရွှေဥဒေါင်း၏ ဘဝတသက်တာမှတ်တမ်းများ၊ ဂျူး ၊ ဝင်းဝင်းလတ်၊ မင်းလူ၊ နီကိုရဲ ၊ မိုးမိုး (အင်းလျား) ၊ ခင်နှင်းယု ၊ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး၊ ဖေမြင့် ၊ ချစ်ဦးညို လင်္ကာဒီပချစ်သူ၊ မောင်စိန်ဝင်း ( ပုတီးကုန်း) ၊ နွမ်ဂျာသိုင်း ၊ ဆရာတော် ဦးဇောတိက အရှုပ်ထဲမှာ ရှင်းအောင်နေ စသည်ဖြင့် နှစ်သက်သောစာအုပ် တော်တော်များသည်။
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင် ကျောင်းစာကြည့်တိုက်၊ ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်များ အများအပြား ရှိသည်။ မိဘများသည် ကလေးများကို အပတ်စဉ် စာကြည့်တိုက် လိုက်ပို့ရသည်။ ကလေးစာအုပ်ဆိုသော်ငြား ရောင်စုံဓာတ်ပုံများ၊ ကာလာများဖြင့် ပျင်းဖို့ကောင်းမနေ။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကြောင့် တခါတရံ တောင်းယူဖတ်ရှုရသည်။ ကျမ်းပြုစာအုပ်အတွက် လိုအပ်သော အထောက်အထားစာအုပ်များ ဖတ်ရှုဖို့ တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်သို့ တခါဝင်ဖူးသည်။ ထိုကျောင်းစာကြည့်တိုက်သည် နောက်ထပ်တခါ ထပ်လာဖို့ မဆွဲဆောင်ခဲ့။
နိုင်ငံခြားကျောင်းမှ စာကြည့်တိုက်သည် လွန်စွာကြီးမားပြီး လိုချင်သည့်စာအုပ်ကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်သည်။ အမျိုးအစားစုံလင်လှပြီး တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းသည်။ စာအုပ်များသာမက စီဒီ၊ ဒီဗွီဒီ၊ ပရင့်တာ၊ အင်တာနက်ဝိုင်ဖိုင်ရသည်။ တိတ်ဆိတ်သော စာကြည့်တိုက်တွင် လာအိပ်သောကျောင်းသားများကို လုံခြုံရေးစောင့်က လာနိုးတတ်သည်။ အိမ်တွင် အင်တာနက်ဒေါင်းသွားသောအခါ အိမ်နားရှိ ဂျက်ဖာဆန်ကောင်တီစာကြည့်တိုက်တွင် တနေကုန်သွားနေဖူးသည်။
လူနှစ်ယောက်သာနေခွင့်ရှိသောတိုက်ခန်းတွင် အလုပ်လာရှာသော သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါ နေထိုင်စဉ် စစ်ဆေးရေးလာမည်ဆိုသောအခါ ရှောင်သည့်နေရာမှာ စာကြည့်တိုက်ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ရ၊ ည ၈ နာရီ စာကြည့်တိုက် မပိတ်မချင်း မနှင်ထုတ်၊ ကျောင်းဆင်းချိန် စာကြည့်တိုက်ဝင်ကာ စာအုပ်ငှားသော ကလေးငယ်များ၏ ဆူညံသံ၊ ငါးနှစ်အောက်ကလေးငယ်များအတွက် မိဘများပါတက်ရသော သင်တန်းချိန်မှလွဲ၍ စာကြည့်တိုက်သည် တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းသည်။ စာအုပ်ဗီရိုကြီးများအလယ်တွင် ထိုင်ကာ စာအုပ်ဖတ်ရခြင်းမှာ အရသာတမျိုးရှိသည်။
ကားစီးသောအခါ အပြင်ဖက်သို့ ငေးနေ၍ရသော်လည်း ရထားမြေအောက်ထဲ ဝင်သွားသောအခါ ငေးစရာ တရိပ်ရိပ်ပြေးနေသော အမည်းရောင်လှိုဏ်ခေါင်းသာ ရှိသည်။ ထိုင်ခုံနေရာရ၍ ပင်ပန်းနေလျှင် မျက်စိမှိတ်ကာ အိပ်တတ်သော်လည်း များသောအားဖြင့် ထိုင်ခုံနေရာ မရတတ်။ ရထားသည်လည်း ယိမ်းယိုင်မှု နည်းပါးသောကြောင့် စာအုပ်တအုပ်ဆောင်ထားကာ ထိုင်ခုံနေရာမရလျှင် စာဖတ်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတုန်းက စာဖတ်တန်းတွင် ဆရာနှင့်အတူ ခြောက်လခန့်ဖတ်ခဲ့သော Colorful Myanmar စာအုပ်ကို သုံးလအတွင်း ဖတ်ပြီးသွားသည်။ တဦးတယောက် ကြည့်သည်ကို မကြိုက်သော နိုင်ငံခြားတွင် မျက်လုံးအကြည့်များကို ရှောင်ရှားဖို့ကား၊ ရထား စီးချိန်၊ စောင့်နေချိန်များတွင် စာဖတ်ဖြစ်သည်။
မိခင်နိုင်ငံတွင် ထိုသို့စာဖတ်လျှင် စာဂျပိုး၊ ဂေါက်နေသည့်ကောင်ဟု တီးတိုးနိုင်သော်လည်း နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် မထူးဆန်းလှ။ တနေ့ရထားပေါ်တွင် ဥရောပသားတယောက် စာအုပ်ကဲ့သို့သော အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းတခုကိုင်ကာ စာဖတ်နေသည်။ ထိုအချိန်တုန်းက အိုင်ပတ်တူးပေါ်ခါစ ဖြစ်သောကြောင့် ခြင်္သေ့ကျွှန်းသူကျွှန်းသားများ ကျောက်သင်ပုန်း တကိုင်ကိုင် ဖြစ်နေချိန် ကျောက်သင်ပုန်းထက်သေးငယ်ပြီး တကယ့်စာအုပ် ဖတ်ရသလို ထင်ရသည့် ထိုအရာကို စိတ်ဝင်စားမိသည်။ သို့သော် မည်သည့်အရာမှန်း မသိခဲ့။
ဟောင်ကောင်မှ ချီကာဂိုသို့ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကို ဖြတ်ကျော်ကာ ၁၂ နာရီ လေယာဉ်စီးရချိန် ညဖက်ဖြစ်သောကြောင့် မှောင်မည်းနေသည်။ ဘေးမှအန်တီကြီးသည် ထိုစာအုပ်ကဲ့သို့အရာကို ထုတ်ကာ စာဖတ်လေသည်။ လေယာဉ်ပျံ တစင်းလုံးတွင်လည်း တော်တော်များများ ထိုအရာကို ကိုင်ဖတ်ကြသည်။ ထိုအရာသည် အမေဇုန်မှ ကင်ဒမ်ခေါ် အီးဘွတ်ရီဒါဖြစ်မှန်း စတိတ်ရောက်ပြီး တော်တော်ကြာမှ သိလေသည်။ စတိတ်တွင် မြို့ငယ်လေးနှင့် မလိုက်ဖက်အောင် ကြီးမားလှသော စာကြည့်တိုက်၊ စည်ကားနေတတ်သော စာကြည့်တိုက် တော်တော်များများ ရှိသည်။ စာကြည့်တိုက်တွင် စာအုပ်များသာမက စီဒီ၊ ဒီဗွီဒီများ ရှိသည်။
ကန်တက်ကီအိမ်ရှင်အမသည် ညတိုင်း သူ့ကလေးများကို ပုံပြင်စာအုပ် ဖတ်ပြသည်။ စောင့်ဆိုင်းရချိန်များတွင် အော်ဒီယိုအီးဘွတ်ဖွင့်ကာ နားထောင်သည်။ တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှ သူ့မိခင်သည် စာကြည့်တိုက်မှုးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကြောင့် စာအုပ်များကို နှစ်သက်သည်။ ကင်ဒယ်သာမက စာအုပ်များကိုလည်း ဖတ်သည်။ ဂိမ်းကစားဖို့ ကွန်ပျူတာကို မြေးနှင့်အပြိုင် လုတတ်သော အဘွား ၊ အိမ်တကာလည် အတင်းတုပ်တတ်သော အဘွား၊ နှလုံးထီတွက်သော အဘွားထက် စာအုပ်ဖတ်နေသော အဘွားသည် ကျက်သရေရှိသည်။ ထို့ထက် တရားအားထုတ်နေသောသူ၊ သတိအမှတ်ကလေးနှင့်နေသောသူသည် ပိုကျက်သရေရှိသည်။ ကန်တက်ကီတွင် ကားမောင်းရသောကြောင့် စာသိပ်မဖတ်ဖြစ်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီသို့ အသွားအပြန် နာရီဝက်ရထား စီးချိန်များတွင် စာဖတ်ဖြစ်သည်။
ဒီစီတွင် ဘူတာရုံတိုင်း ဖရီးသတင်းစာပုံးများ ထားရှိသလို သတင်းစာကမ်းသူများ ရှိသည်။ သတင်းစာပုံးမှ ယူဖို့မေ့လျော့နေလျှင်တောင် သတင်းစာကမ်းသူများကြောင့် သတင်းစာဖတ်ဖြစ်သည်။ ထိုသတင်းစာကမ်းသူများသည် စာဖတ်ဖို့ ဆော်သြသူများဖြစ်သည်။ ဆင်းရမည့်ဘူတာရောက်လျှင် ဖတ်ပြီးသားသတင်းစာကို သတင်းစာ သီးသန့်ပစ်သည့် အမှိုက်ပုံးသို့ ပစ်သည်။ ညဖက် ရုံးဆင်းလျှင် ရထားစီးသူ အများစုသည် စာအုပ်၊ အီးဘွတ်ရီဒါ၊ အိုင်ပတ်၊ မီနီများထုတ်ကာ စာဖတ်ကြသည်။ အီးဘွတ်ရီဒါ၊ အိုင်ပတ်ထက် စာအုပ်ကို လက်ဖြင့်ကိုင်ကာ ဖတ်ရခြင်းကို နှစ်သက်သော်လည်း တချို့စာအုပ်များကို ပီဒီအက်ဖ်ဖိုင်အဖြစ် ဒေါင်းထားသောကြောင့် အီးဘွတ်ဖြင့်သာ ဖတ်နိုင်သည်။ ဒီစီသူဒီစီသားများသည် စာအုပ်၊ အီးဘွတ်ဆောင်ကာ စာဖတ်ကြသည်။ ကောင်းသောအလေ့အထပင်တည်း။
လူမည်းအိမ်စေ အမျိုးသမီး လူဖြူအိမ်များသို့ အစေခံအလုပ်သွားလုပ်လျှင် လူဖြူ အိမ်များတွင် စာကြည့်ခန်း ရှိသည်။ လူဖြူမိဘများသည် ကလေးများကို ညနေတိုင်း စာဖတ်ကြသည်။ လူမည်းများသည် ထိုကဲ့သို့ စာမဖတ်သောကြောင့် မတိုးတက်။ ထိုလူမည်းမသည် စာကြည့်တိုက်မှ စာအုပ်များကို ငှားရမ်းကာ သားဖြစ်သူကို ဖတ်ပြခိုင်းသည်။ သားဖြစ်သူမှာ စာဖတ်ခြင်းတန်ဖိုးကိုသိကာ ပညာရှာသောကြောင့် တခြားလူမည်းကလေးများလို ဆိုးပေလေလွင့်မနေဘဲ ကြီးပွားသွားသည်။
စာဖတ်သည့် လူမျိုး၊ စာကြည့်တိုက်တွင် စည်ကားနေတတ်သော တိုင်းပြည်သည် တိုးတက်သည်။ စာမဖတ်သည့်နေ့သည် တိုးတက်မှုမရှိသောနေ့ ဖြစ်သည်။ စာအုပ်၊ အီးဘွတ်ရီဒါဆောင်လျှင် အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်သည်။ စာဖတ်ခြင်းသည် အယ်ဇိုင်းမားရောဂါကို ကာကွယ်သည်။ ထို့ပြင် စာဖတ်နေသည့် လူတယောက်ဟန်ပန်သည် ဆွဲဆောင်မှုတမျိုး ရှိသည်။
အပျင်းပြေစေရန်၊ ဗဟုသုတတိုးရန်၊ လေ့လာဆည်းပူးရန်၊ စိတ်အာဟာရဖြစ်စေရန် မည်သည့်အတွက်ပင်ဖြစ်ဖြစ် စာဖတ်နေသူများကို မြင်ရသည်မှာ တမျိုးငြိမ်းချမ်းသည်။
ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၁၃။
All photos are from Google & Amazon.
ငါးမျှားဝါသနာပါသူတွေ၊ ငါးမျှားဖို့ တက်ကြွနေသူတွေ မြင်ရတိုင်း ငါးမျှားခြင်းကို ဘာလို့နှစ်သက်ကြပါလိမ့်ဟု တွေးမိသည်။ ငါးမျှားတံနှင့် ယောက်ျားလေးကို တွဲမြင်မိသလို အေးအေးဆေးဆေး ငါးထိုင်မျှားဖို့ အချိန်မရှိတာလား၊ စိတ်ရှည်လက်ရှည် မစောင့်နိုင်တာလားတော့မသိ ငါးမျှားသူအများစုမှာ ယောက်ျားလေးများသာ ဖြစ်သည်။
ဇာတိမြို့လေးဘေးနား ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသာ မြစ်ကမ်းတလျှောက် ငါးမျှားသူများကို တွေ့လျှင် ငါးဘယ်နှစ်ကောင်ရပြီလဲဟု မေးမည်။ သူတို့ရသော ငါးများကို စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ရှုမည်။ ငါးမျှားတံကို ခဏကိုင်ကြည့်မည်။ သို့သော် ဘယ်သောအခါမှ ငါးမျှားချင်စိတ် မဖြစ်ခဲ့။ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများကလည်း ငါးမျှားဝါသနာမပါသောကြောင့် ငါးမျှားခြင်းနှင့် အလှမ်းအတော်ဝေးနေခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ခန့် နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက် ဧပြီလ၏ တခုသောနေ့ရက်တွင် ကျောင်းအနီးတွင်ရှိသော ကန်သို့ ငါးမျှားထွက်ကြသည်။ ငါးမျှားသူက သုံးယောက် လိုက်ပါအားပေးသူများက ဆယ်ယောက်ကျော်ဖြစ်သည်။ ငါးမျှားသူက ငါးမျှားချိန်တွင် လိုက်ပါသူများက ဓာတ်ပုံရိုက်၊ လမ်းလျှောက်၊ သီချင်းဆိုကြသည်။ နှစ်နာရီကျော်ခန့် စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ဆိုင်းပြီးမှ ငါးတကောင်မိသည်။ ထိုတကောင်တည်းသော ငါးသည် ဆယ့်ငါးယောက်အုပ်စုအတွက် မလောက်ငှ။ အဆောင်တွင် မီးဖိုဆောင်မရှိ ချက်ပြုတ်ခွင့်မရှိသောကြောင့် အပြင်ဆောင်တွင်နေထိုင်သော စီနီယာထံသို့ ပေးလိုက်ကြသည်။
လည်ပတ်စရာမရှိ သေးငယ်သောမြို့လေးတွင် ခြိုးခြံ‌ချွှေတာရသော ကျောင်းသားများသည် နွေရာသီကျောင်း ပိတ်ရက်တွင် ခရီးလည်းမထွက်နိုင်၊ အဆောင်တွင်လည်း မနေချင်၊ အနီးအနားတဝိုက် လည်ပတ်ဖို့ ကားကလည်း အလုံအလောက်မရှိ။ နှစ်စီးသာရှိသောကားသည် ဆယ့်ငါးယောက်အုပ်စုကို နှစ်ခေါက် သုံးခေါက် ကြို့ပို့လုပ်လုပ်ပြီး ငါးမျှားခြင်းကို ပွဲတော်ကျင်းပသလို တခမ်းတနား ကျင်းပကြဖူးသည်။ သူတို့အတွက် ငါးတကောင်သာရလည်း ကိစ္စမရှိပါ။ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက် သူငယ်ချင်းများ တွေ့ဆုံပွဲ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
တခုသောရုံးပိတ်ရက်က အိမ်နှင့်မနီးမဝေးတွင်ရှိသော စနီကာပန်းခြံတွင် ဘာဘီကျူးကင်ကြပြီး ငါးမျှားသည်ကို လိုက်ပါအားပေးကြသည်။ တခြားပြည်နယ် ကားမောင်လိုင်စင်ဆိုလျှင် ဈေးပိုကြီးပြီး မေရီလန်းကားမောင်းလိုင်စင် ဖြစ်သည့်အတွက် ငါးမျှားလိုင်စင်ဖိုး တနှစ်လုံးစာ ၂၀ ပေးရသည်။ ဇာတိမြို့တွင်တော့ လိုင်စင်ဆောင်စရာမလို မြစ်ရိုးတလျှောက် ကြိုက်သည့်နေရာတွင် ကြိုက်သလောက် ငါးမျှားနိုင်သည်။ ငါးမျှားတံကို ပလတ်စတစ်အကြည် ကြိုးတပ်ပြီး ရေအောက်နစ်မြုပ်စေဖို့ သံလုံးလေးများ တပ်သည်။ ငါးမျှားစာအတွက်ကတော့ တီကောင်အစစ်တွေကို စက်ရုံမှာကြိတ်ပြီး တကယ့်တီကောင်အစစ်တွေလို အနံ့အရသာရှိသော အာတီဖစ်ရှယ် တီတောင်။
အနီးတဝိုက်မှ ဖော့ဘူးလက်စလက်ကျန်များကြောင့် ထိုနေရာတွင် ငါးမျှားကြမှန်း သိသာသည်။ ရေသည် ကြည်လင်နေပြီး နက်သည်။ ငါးမျှားတံကို လွှဲသောအခါ အဝေးသို့ထွက်ပြေးရလေသည်။ တော်ကြာ ငါးမျှားချိတ်က ငါးမမိဘဲ လူကိုမိနေမှ။ ငါးမျှားတံကို ငြိမ်နေအောင် ကိုင်ထားရင်း ရေပြင်တွင်ပေါ်နေသော ဘော့သီးလေးအား ကြည့်ကာ ငါးလာစားမစား ခန့်မှန်းရသည်။ ရေစီးနှင့်အတူ ငါးမျှားကြိုး ဘယ်ကိုဦးတည်နေမှန်း စောင့်ကြည့်ရသည်။ စကားအလွန်များသောကြောင့် နားညည်းဒဏ် မခံနိုင်ဘိအလား ငါးများအဝေးသို့ ထွက်ပြေးသောကြောင့် သူငါးမျှားလျှင် ငါးတကောင်မှမမိဟုဆိုသော မလေးရှားတရုတ်မ ထိန်ထိန့်ကို သတိရမိသည်။
ငါးမျှားသူက ငါးမျှားနေတုန်း ငါးမမျှားသူများက တောင်စောင်းတွင် ဖျာဖြန့်ခင်းကာ အေးအေးလူလူ အိပ်စက်အနားယူကြသည်။ တောင်စောင်းမှ ကြည့်လျှင် ကောင်းကင်ပြာပြာတွင် မျှောလွှင့်နေသော တိမ်ဆိုင်ဖြူဖြူများကို မြင်ရသည်။ အုပ်စုဖွဲ့ ပျံသန်းသွားသော ငှက်ကလေးများကို တွေ့ရသည်။ တခါတရံ ဖြတ်သန်းသွားသော လေယာဉ်ပျံများကို တွေ့ရလျှင် ထိုလေယာဉ်ပျံက အိမ်သို့ပို့ဆောင်ပေးလျှင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဟု တွေးကြသည်။
ကြည်လင်နေသော ကန်ရေပြင်သည် စိမ်းလန်းနေသော သစ်ပင်များကြောင့် ပိုပြီးစိမ်းမြနေသည်။ ကန်ပတ်လည်တလျှောက် လမ်းလျှောက်ကြသူများ၊ ခွေးကျောင်းကြသူများ၊ ငါးမျှားကြသူများဖြင့် လူသူကင်းမဲ့မနေခဲ့။ တခါတရံ ကာရက်လှေလှော်သူများကို တွေ့ရသည်။ အေးမြသောလေပြေ တဟူးဟူး တိုးဝှေ့သွားသည်။
ငါးတွေမိလျှင် ပျော်ရွှင်ရသလို ဘဝတွင်လည်း အောင်မြင်မှုတွေရလျှင် ပျော်ရွှင်ရသည်။ ငါးတွေမမိလည်း ကိစ္စမရှိပါ ငါးမျှားနေသရွေ့တချိန်ချိန်တွင် မိပေလိမ့်မည်။ ဘဝတွင်လည်း အောင်မြင်တွေမရလည်း ကိစ္စမရှိပါ။ ဆန္ဒ၊ ယုံကြည်မူ၊ ကြိုးစားမူတွေရှိလျှင် တနေ့အောင်မြင်မှာ သေချာသည်။ ငါးကြီးကြီး လိုချင်သော်လည်း ငါးသေးသေးသာ မိသည့်အခါများလည်း ရှိသည်။ ဘဝတွင်လည်း ဆန္ဒနဲ့ဘဝ ထပ်တူမကျခြင်းများလည်း ရှိသည်။ ရေကန်စပ်နားတွင် ငါးတွေအများကြီး တွေ့သော်လည်း ငါးမမိသောအခါ အားမလိုအားမရ ဖြစ်မိသည်။ မြင်နေရသောငါးကို ကိုယ်တိုင်ငုပ်ပြီးသာ ဖမ်းလိုက်ချင်မိတော့သည်။ ဘဝတွင်လည်း အားမလိုအားမရဖြစ်မူတွေ ရှိနေပေလိမ့်မည်။ ငါးကြီးများ ငါးမျှားချိတ်နား ရစ်သီရစ်သီ လာလုပ်သော်လည်း အာတီဖစ်ရှယ်ငါးစာကို ကြိုက်ပုံမရ အနံ့ရှုပြီး လှည့်ထွက်သွားသည်။ ဘဝတွင်လည်း ဆန္ဒတွေ၊ အိမ်မက်တွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ အရာမထင်လာခြင်းများလည်း ရှိသည်။
ငါးများနှစ်သက်သော ငါးစာနှင့် မျှားဖို့လိုအပ်သလို စိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့် စောင့်ဆိုင်းတတ်ဖို့လည်း လိုသည်။ ဘဝတွင်လည်း ရည်မှန်းချက်တွေ ဖြစ်မြောက်ဖို့ သင့်လျှော်သော အားထုတ်မှု၊ ခေတ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေကိုက်ညီဖို့၊ သည်းခံစောင့်ဆိုင်းတတ်ဖို့လိုအပ်သည်။ ငါးသေးသေးလေးမိသောအခါ ကိုရီးယားဆိုင်ရေကန်ထဲမှ ငါးကြီးကိုဝယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးမည်ဟု လှောင်ပြောင်သရော်ခြင်း ခံရခြင်းများလည်း ရှိသည်။ ဘဝတွင်လည်း အထင်သေးခြင်း၊ လှောင်ပြောင်သရော်ခံရခြင်း၊ အတင်းစကားဆိုခံရခြင်းများ ရှိနိုင်သည်။ မိထားသော ငါးနှစ်ကောင်ထဲမှ တကောင်သည် ပုံးထဲမှ လာရင်းရေကန်ထဲသို့ ခုန်ချထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသည့်အခါ ငိုအားထက် ရယ်အားသန်။ ဘဝတွင်လည်း ရရှိထားသော အခွင့်အရေးများ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းများဖြင့်လည်း ကြုံနိုင်သည်။
ငါးသေးသေးလေး မိသောအခါ ရေကန်ထဲသို့ ပြန်လွှတ်ရခြင်းများလည်း ရှိသည်။ ဘဝတွင်လည်း တခါတရံ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံရခြင်းများလည်း ရှိသည်။ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ အားမလိုအရဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ သည်းခံစောင့်ဆိုင်းခြင်း၊ စွန့်လွှတ်ခြင်းများဖြင့် ငါးမျှားခြင်းသည် ရသစုံပေးသည်။ ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီး ငါးထိုင်မျှားရခြင်းသည် တောင်တက်ခြင်းလောက် ခွန်အားသုံးဖို့မလို။
ကောင်းကင်တွင် မျှောလွင့်နေသော တိမ်ဆိုင်ဖြူဖြူများကို ငေးမောရင်း သာယာစွာ သီ‌ကျွှေးနေသော ကျေးငှက်တေးသံကို နားဆင်ကာ ကန်ရေပြင်ပေါ် ဖြတ်သန်းလာသော အေးမြသည့်လေညှင်း ဆော်သွေးတိုက်ခတ်ခြင်းကို မျက်စိလေးမှိတ်ကာ ခံစားမိသည်။ ရေကန်စပ်နား ထိုင်ခုံလေးချကာ ငါးထိုင်မျှားခြင်းသည် ပျင်းဖို့ကောင်းသည် ထင်ရသော်ငြား တမျိုးတဖုံ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသည်။
မျှားနေသောသူဆီက ငါးမျှားတံ ခဏငှားကာ ငါးမျှားဖူးရုံ ငါးလည်းတကောင်မှ မမိဘူးသောကြောင့် ငါးမျှားဖို့စိတ်အားမထက်သန်။ တောင်တွေတက်ဖို့ ခွန်အားမရှိတော့လျှင် ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီး ငါးထိုင်မျှား ဖြစ်နေမလားမသိ။ ငါးမျှားခြင်းထက် ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော အရာများတွေ့၍ လုံးဝငါးမမျှားသည်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၃။
Photos - credit to Andrew.
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၂၀
ရုံးဆင်းချိန် ဘူတာရုံအထက်ဖက် လမ်းမထက်မှာ ပီ...ပီ..ပီ အသံကြားလို့ ဘာလဲဟဲ့ သွားစပ်စုတာ ပြည်နယ်ပေါင်းစုံက ရဲတွေ ဘင်ခရာတီး၊ နှဲမှုတ်၊ အလံကိုင်ပြီး ချီတက်နေကြတာပါလား။ ကားအဟောင်းကြီးတွေမောင်းကာ လမ်းဘေးက ရပ်ကြည့်နေတယ့်သူတွေကလည်း လက်ခုပ်တွေတီးလို့။ အံမယ် သူတို့ယူနီဖောင်းက စကော့တလန်တွေလို စကဒ်နဲ့။
ရဲချီတက်ပွဲ အားပေးနေလို့ အိမ်ပြန်နောက်ကျပါတယ်ဆိုမှ ဆင်းရမယ့်ဘူတာ မရောက်ခင် Takoma ဘူတာမှာ အားလုံးဆင်းတယ့်။ Silver Spring ၊ Forest Glen ဘူတာတွေဆီ သွားဖို့ ရှယ်တယ်ကို မိနစ် ၂၀ လောက် စောင့်ရတယ်။ ရုံးဆင်းချိန်ဆိုတော့ လူတွေက အများကြီး ရဟတ်ယာဉ်က ဝဲနေလို့ ဗုံးများပေါက်သလား။ Silver Spring ဘူတာမှာလည်း ရဲကားတွေ အများကြီးတွေ့တယ်။ ဘူတာ ၂ မှတ်တိုင်ကို ကွေ့ပတ်မောင်းနေရတာ ၁ နာရီလောက် ကြာတယ်။ Forest Glen ဘူတာရောက်လို့ Glenmont ဖက်သွားသွား Shady Grove ဖက်သွားသွား တခြမ်းတည်းမှာပဲ စောင့်ပါ။ လေးမိနစ်ကြာရင် ရထားလာပါမယ် ၊ စိတ်ရှည်စွာ စောင့်ဆိုင်းပေးတယ့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နဲ့။ အဲဒီလေးမိနစ်က နှစ်ခါတောင်။ ဒီလိုနဲ့ အိမ်ကို ည ၉ နာရီမှ ပြန်ရောက်တယ်။
နောက်နေ့မှ သိတယ် မေ ၁၂ ကနေ ၁၈ အထိ National Police Week ဖြစ်လို့ တနိုင်ငံလုံးကရဲတွေ ဒီစီကို လာရောက်ပြီး ချီတက်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲနေတာ ပါတယ့်။ မနေ့ညက Silver Spring ဘူတာမှာ ရထားမီးလောင်လို့ Traffic jam တွေ ဖြစ် တော်သေးတာက လူမရှိတယ့် ရထားဖြစ်နေလို့။
မေလ ၂၀ ရက်နေ့ အိုကလားဟိုးမားပြည်နယ် မိုးမြိ ု့မှာ တိုက်ခတ်သွားတယ့် လေဆင်နှာမောင်းဟာ EF5(Enhanced Fujita Scale) အမြင့်ဆုံး တနာရီ မိုင် ၃၀၀ နီးပါးနဲ့ တိုက်ခတ်သွားတာ လူ ၂၀ ကျော် သေဆုံးပါတယ်။ ကျောင်း ၂ ကျောင်းနဲ့ ဆေးရုံတရုံ ပြိုကျပြီး သေဆုံးသူ အများစုက ကျောင်းသားကလေးတွေပါ။ တော်နေဒိုးများတယ့် ပြည်နယ်က ကျောင်းဖြစ်ပြီး တော်နေဒိုးတိုက်ရင် ခိုလှုံဖို့ ကျောင်းတွေမှာ မြေအောက်ထပ်မရှိတာ ဝေဖန်ကြပါတယ်။ ၁၉၉၉ မေ၃ မှာ EF5တော်နေဒိုး တိုက်လို့ ၄၆ ယောက် သေဆုံးသွားတာလည်း အဲဒီနား တဝိုက်မှာပါ။
ကိုယ်နေခဲ့ဖူးတယ့် အိုင်အိုဝါ၊ အင်ဒီယားနား၊ အိုဟိုင်းရိုး၊ ကန်တက်ကီပြည်နယ်တွေက တော်နေဒိုးဇုန်။ အိုင်အိုဝါမှာ ကျောင်းတက်နေတုန်းက တော်နေဒိုးဖြတ်ချိန် မိုးခြိမ်းသံတွေ တချူန်းချူန်း လျှပ်စီးတွေ တလက်လက်နဲ့ ကြောက်လို့ ကိုယ်တို့လေးယောက် စုအိပ်ကြဖူးတယ်။ အိုဟိုင်းရိုးမှာ ကောင်းကင်က မိုးမှောင်ကျ Siren မြည်လာလို့ ခိုစရာ မြေအောက်ထပ်လည်း မရှိ ဘယ်ပြေးရမတုန်းဆိုတော့ ဆူနမ်နဲ့မိုင်းဖန်က ပြတင်းပေါက်မရှိတယ့် ရေချိုးခန်းအိမ်သာထဲ ဝင်နေတယ့်။ အနွေးထည်၊ ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ ဘွတ်ဖိနပ်ဝတ်၊ အရေးကြီးတယ့် စာရွက်စာတမ်း၊ မုန့်၊ ရေဗူး ၊ စောင်အပါးတထည် ကျောပိုးအိတ်ထဲထည့်ပြီး အသင့်ပြင်ထားရတယ်။ ကန်တက်ကီမှာ တော်နေဒိုး သတိပေးချက်ရှိတယ့်တနေ့ မနက် ၃ နာရီလောက် ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းက Siren မြည်လာလို့ အိမ်ရှင်မိသားစု ကိုယ့်အခန်းရှေ့တီဗွီကြည့်တယ့်နေရာမှာ လာအိပ်ကြတယ်။ ကိုယ်ကတော့ မြေတွင်းအောင်းပြီးသားမို့ ပြောင်းဖို့မလိုဘူးကိုး။
အခွန်ထမ်းတွေဟာ ဧပြီလမတိုင်ခင်မှာ တနှစ်စာဝင်ငွေရဲ့ဖယ်ဒရယ်ခွန်၊ ပြည်နယ်ခွန်တွေကို (တန်နက်ဆီ၊ တက္ကဆက် ပြည်နယ်တွေက ပြည်နယ်ခွန် ဆောင်စရာမလို) Internal Revenue Service (IRS) ဆိုဒ်မှာ ဆောင်ရပါတယ်။ Tax Filing ကို တချို့က စာရင်းကိုင်၊ တက်စ်စပါရှယ်လစ်တွေနဲ့ လုပ်ကြပြီး ကိုယ်တို့ကတော့ TarboTax ဆော့ဝဲလ် သုံးပြီးဆောင်ကြတယ်။ ဆော့ဝဲလ်သုံးခ ဖယ်ဒရယ်ခွန်ပဲ ဆောင်ရတယ့် အမ်းထရူးက ၄၀၊ ဖယ်ဒရယ်ခွန်၊ ပြည်နယ်ခွန်ဆောင်ရတယ့် ကိုယ်နဲ့ ဆူနမ်က ၆၀၊ ဖယ်ဒရယ်ခွန်၊ မက်ဆာချူးဆက်၊ မေရီလန်း နှစ်ပြည်နယ်မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ့် ရာမားက ၈၀ ပေးရတယ်။ တချို့က လစဉ်အခွန်နည်းနည်းပဲ ဆောင်ခဲ့လို့တက်စ်ရီဖန်း ပြန်မရတယ့်အပြင် အစိုးရကို ပြန်ပေးရတယ်။ ကိုယ်တွေကတော့ လစဉ်မှန်မှန်ဆောင်ခဲ့လို့တက်စ်ရီဖန်း ပြန်ရတယ်။ တက်စ်ရာသီချိန်တုန်းကဆိုရင် Accepted ပြီလား Approved ပြီလား Refunded ပြီလား ဆိုပြီး IRS ဆိုဒ်ကို နေ့တိုင်း ဝင်... ဝင် ကြည့်ရတာ။ IRS ဆိုတာ အခွန်စည်းကြပ်တယ့် အဖွဲ့အစည်းပါ။
ကားမှတ်ပုံတင်ငွေ ၂၀၀ အတွက် ကလိမ်း Claim ငွေ ၂ ကျပ် ပြန်ရတာမျိုး၊ ကျောင်းလခ ဘယ်လောက်ပေးထားရင် ဘယ်လောက်ကလိမ်းနိုင်တာမျိုး (ကန်တက်ကီပြည်နယ်မှာ နေတာမို့ ကန်တက်ကီပြည်နယ်က ကျောင်းဆိုရင် ကလိမ်းလို့ရပေမယ့် အိုင်အိုဝါပြည်နယ်က ကျောင်းမို့လို့ ကလိမ်းလို့မရ)၊ အိမ်၊ သင်္ဘော ဝယ်ထားရင်၊ ကလေးဘယ်နှစ်ယောက်ဆိုရင်၊ မိဘကို ထောက်ပံနေတာမျိုးဆိုရင်၊ အတူနေမိသားစုမှာ မသန်မစွမ်းရှိရင်၊ နိုင်ငံခြားမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ရှိနေရင်၊ နိုင်ငံခြားက ဝင်လာတယ့် ငွေရှိရင် ဘယ်လောက်ကလိမ်းနိုင်တာမျိုး ၊ အမေရိကန်ကြက်ခြေနီအသင်းကို လှုတယ့်ငွေတွေဆိုရင် အခွန်ကင်းလွတ်တာမျိုး။ အခွန်ဥပဒေတွေက ရှုပ်ထွေးသလို ပြည်နယ်တွေပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနေသေးတယ်။
မေလမှာ IRS က အိုဘားမားရဲ့ ဒီမိုကရက်တွေနဲ့ ပနာရတယ့် Tea Party အဖွဲ့အစည်းတွေကို အခွန်သက်သာအောင် လုပ်နေတယ်လို့ သတင်းထွက်လာပါတယ်။ အိုဘာမားအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က သိပေမယ့် အိုဘားမားသိအောင် မတင်ပြဘူး။ နောက်ဆုံးသိရတော့မှ ဒေါသပုန်ထပြီး အိုဘားမားက IRS အကြီးအကဲကို ချက်ချင်း ဖြုတ်တော့တာပဲ။ ခုလည်း ရုံးတင်ကြားနာ စစ်ဆေးနေပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဘာလုပ်နေမှန်း သိရအောင် ဘို (အိုဘာမားရဲ့ခွေး)...ရုံးစာရွက် သွားယူစမ်း..ဆိုပြီး အိုဘားမားကို ပြောင်လှောင်သရော်ကြတယ့် ကာတွန်းကို မနက်တိုင်း ဘူတာရုံတွေမှာ အလကားကမ်းတယ့် ဝါရှင်တန်တိုင်းစ် သတင်းစာတွေမှာ တွေ့လို့ ပြံ ုးမိသေးတယ်။
ကော်လာပေါ်က နှုတ်ခမ်းနီ သူလေလည်တာ မိပြီ...မိသက် လက်ချက်လား...မိစမ်း လက်ချက်လား...
(သတိ..သူလေလည်တာဟု မဖတ်ရ.. သူလေ...လည်တာဟု ဖတ်ရမည်) မိသက်၊ မိစမ်း လက်ချက်တော့ မဟုတ်။ ၂၀၁၁ အမေရိကန်အိုင်ဒေါ ဒုတိယဆုရှင် ဖိလစ်ပိုင်မလေး ဂျက်ဆီကာ့အန်တီ လက်ချက်။ မေ ၂၉ အာရှအမေရိကန် ပစိဖိတ်ကွျှန်းနေသူများ အမွေအနှစ်လ အထိမ်းအမှတ် အိမ်ဖြ ူတော်မှာ ကျင်းပတယ့်ပွဲမှာ အခုလိုမျိုး နွေးထွေးစွာ ကြိ ုဆိုတာကို ဝမ်းသာပါတယ်...ဂျက်ဆီကာလား..မဟုတ်သေးဘူး..အန်တီ...ဟိုမှာကြည့်လိုက်...
သူ့ကော်လာပေါ်က နှုတ်ခမ်းနီကို လက်နဲ့ညွှန်ပြရင်း
အားလုံးကို သက်သေထားချင်လို့ပါ...မစ်ရှဲနဲ့ ပြသနာမဖြစ်ချင်ပါဘူး...ဒါကြောင့်မို့ အားလုံးရှေ့မှာ ရှင်းတာပါ...
အမေစုကို ကစ်ပေးတုန်းက တခါ၊ ကော်လံပေါ်က နှုတ်ခမ်းနီ ခုတခါ ...အတော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ့် အိုဘားမား...အာဘွား...
(သတိ... နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးမထားမှ အာဘွားပေးရန်)
အသစ်ပြင်ဆင်တယ့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေ အတည်ပြုပြီးသွားရင် DV Lottery ပိတ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံကို ရွှေ့ပြောင်းသူ အရေအတွက်ကို လျှော့ချမယ်။ နိုင်ငံတွင်းက တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေကို ဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီရင် နိုင်ငံသားပေးမယ်။ ဘော့စတွန်ဗုံးခွဲတရားခံလို ဒီနိုင်ငံမှာ ကြီးပြင်း ဒီနိုင်ငံကိုမုန်း ဒီနိုင်ငံကို အန္တရာယ်ပေးမယ့်လူတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သတိပေးလိုက်သလို။
အာရှမှာမွေးနေ့ဆိုရင် မွေးနေ့ရှင်က သူငယ်ချင်းတွေကို လိုက်ကျွှေး တယ်။ အမေရိကန်မှာတော့ မွေးနေ့ဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေက မွေးနေ့ရှင်ကို လိုက်ကျွှေး တယ်။ မွေးနေ့ရှင်က သူငယ်ချင်းတွေကို ကျွှေး မွှေးရလို့ ပိုက်ဆံအများကြီး ကုန်ပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေက မွေးနေ့ရှင်ကို ဝိုင်းကျွှေး ရင် ပိုက်ဆံနည်းနည်းပဲ ကုန်တယ်။ အာရှမှာ မွေးနေ့ရှင်က သူငယ်ချင်းတွေကို စပါယ်ရှယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး အမေရိကန်မှာတော့ သူငယ်ချင်းတွေက မွေးနေ့ရှင်ကို စပါယ်ရှယ်ဖြစ်အောင် လုပ်တယ်။ ကောင်းတယ့်အလေ့အထဆိုရင် လက်ခံကျင့်သုံးသင့်တာမို့ ကိုယ်တို့လည်း ဂျူလှိုင်လမှာ ကျရောက်တယ့် ရာမားမွေးနေ့ကစပြီး နောင်ဘယ်သူ့မွေးနေ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အမေရိကန်စတိုင်ကျင့်သုံးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
စတိတ်မှာ ရုပ်ရှင်ဆိုရင် ဆူနမ်၊ ရာမားတို့နဲ့ ဆုံတယ့် ၂၀၁၂ ဂျူလှိုင် ဘော့စတွန်မှာ Protnus ၊ ဒီဇင်ဘာ မေရီလန်းမှာ Hobbit ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဆူနမ်က ကြိ ုက်ပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ရာမားက မကြိုက်ကြဘူး။ ခုတပတ်က ဆူနမ်က တောင်းဆိုလာတယ် Now You see me သွားကြည့်ရအောင်တယ့်။ လက်မှတ်မရရင် အိန္ဒိယကား ကြည့်မယ် အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးတာမို့ နင် နားလည်မယ်။ ဆူနမ်တို့နဲ့သွားမှ ရုပ်ရှင်ရုံရောက်ဖြစ်တာမို့ ကိုယ်ကတော့ ဘာကားပဲဖြစ်ဖြစ် လိုက်ပြီးသားပဲ။ ဒီတခါတော့ ကိုယ်တို့အားလုံး တလေသံတည်း ထွက်တယ် ကောင်းတယ်လို့။ ကြုံရင် ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ဖို့ လက်တို့လိုက်တယ်ဗျို့။
စင်္ကာပူမှာ ကန်ကုန်းလို့ခေါ်တယ့် ကန်စွန်းရွက်ကို NTUC ၊ ShinSong မှာ အလွယ်တကုူ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ငရုတ်သီးနဲ့ ကြော်တယ့် မလေးရှားစတိုင် ကန်စွန်းရွက်ကြော်ကလည်း စားကောင်းတယ်။
စတိတ်ရောက်ပြီး တနှစ်ကျော်ကြာမှ ကန်တက်ကီက ဗီယက်နမ်ဆိုင်မှာ ကန်စွန်းရွက် တခါရဖူးတယ်။ အိမ်ရှင်အမေရိကန်မက မြည်းကြည့်ပြီး အရသာက Spanich ရွက်နဲ့တူတယ်တယ့်။ အမေရိကန်မှာ ကန်စွန်းရွက် ရှားတယ်။
နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာတွေ တကြတယ့်အရာက ချဉ်ပေါင်ကြော်ပါ။ စင်္ကာပူလို မြန်မာများတယ့်နေရာမှာတော့ ပင်နီစူလားပလာဇာမှာ သွားဝယ်လိုက်ရုံပဲ။ စတိတ်က နိုင်ငံခြားကနေ အသီးအနှံ ၊ အသား တင်သွင်းတာကို အသေအချာ စစ်ပါတယ်။ မူရင်းဒေသက မဟုတ်တယ့် မျိုးစိတ်တွေက မူရင်းဒေသမဟုတ်တယ့်နေရာမှာ ရှင်သန်ရရင် နှစ်နည်းပဲ ရှိပါတယ်။ သေရင်သေ မသေရင် ဒေသခံမျိုးစိတ်တွေ ရှင်သန်လို့ မရအောင် တအားပွားကာ ဇီဝသဟဇာတ ဖြစ်မူတွေကို ကမောက်ကမ ဖြစ်စေပါတယ်။ ကိုယ်တို့ကို အင်္ဂလိပ်စာသင်တယ့် တီချယ်ကာရိုလိုင်း အီတလီက သစ်ရွက်လေးလှလို့ စာအုပ်ကြား ညှပ်လာတာ လေဆိပ်မှာတင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဋ္ဌာနက သစ်ရွက်လေးကို လွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။
မနှစ်က ကားနဲ့အတူ မခိုင် ထည့်ပေးလိုက်လို့တခါ၊ အမေစု ဟောပြောတာကို နားထောင်ဖို အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ဖို့ဝိန်းမြို့ကို သွားတုန်းက မနှင်းဆိုင်က ချဉ်ပေါင်ကြော် ငါးဗူး ဝယ်ခဲ့လို့ တခါ... နှစ်ခါ ချဉ်ပေါင်ကြော် စားရဖူးတယ်။ ကန်တက်ကီက ဗီယက်နမ်ဆိုင်မှာ ချဉ်ပေါင်ရွက်အဖြူနဲ့ တူလို့ ဝယ်လာတာ ကြော်လိုက်တော့ ချွှဲပစ်ပစ်နဲ့ ချဉ်ပေါင်အရသာလည်း မရ လွှတ်ပစ်လိုက်ရတယ် အင်္ဂလိပ်နာမည်က စလုရွှက်ဆိုလား ဘာဆိုလား။
ရှေ့တပတ်က Global Food ဆိုင်မှာ ချဉ်ပေါင်တွေ့လို့ ဝမ်းသားအားရနဲ့ သုံးစည်းတောင် ဝယ်လာတယ်။ အရွက်ကြီးပေမယ့်လည်း နုတယ် ချဉ်တယ် ဒီတခါတော့ ချဉ်ပေါင်စစ်စစ်ရပြီဗျို့။ မြှစ်၊ ပုဇွန်နဲ့ ကြော်စားတယ် အဲ... ငါးပိ မပါဘူး။ ငါးပိက ဗီယက်နမ်ဆိုင်မှာ ဝယ်လို့ရတယ်။ ရွှေမင်းသား ဟင်းရည်ကို ပိုးကောင်နံ့ရတယ်၊ ငံပြာရည်တောင် နံတယ်ဆိုတယ့် အမေရိကန်အိမ်မှာ ငါးပိ သွားချက်လို့ရတော့ ထွက်ပြေးမှာ သေချာတယ်။ အိုဟိုင်းရိုးအိမ်မှာတုန်းက ငါးပိချက်တာ ဆူနမ်က အရမ်းနံလို့တယ့်။
ငါးပိမပါပေမယ့်လည်း ချဉ်ပေါင်ကြော်၊ ချည်ပေါင်ဟင်းချိုလေးက ကိုယ့်အတွက်တော့ နတ်သုဒါ္ဓတမျှပါပဲ။
UFL မှာ မနက်ပိုင်း တရုတ်စာဒီပလိုမာ တနှစ်ကျော် တက်ဖူးတော့ တရုတ်စကား နည်းနည်းပါးပါး ပြောတတ်တယ် ဆိုပါတော့။ တရုတ်တွေနဲ့တွေ့ရင် တရုတ်စကားလေ့ကျင့်ဖို့ အကွက်ကောင်းပဲဆိုပြီး ကိုယ်သိတယ့် တရုတ်စကားကို အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ ညှပ်ပြောတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ အသံထွက်က ဆိုးရွားတယ့်အပြင် အင်္ဂလိပ်လိုလည်း ညှပ်လိုက်သေးတော့ တရုတ်တွေခမျာ မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ် ဘာဆိုလိုမှန်း အသေအလဲ စဉ်းစားရတာ။ ကိုယ်နဲ့တရုတ်လိုပြောရမှာ တရုတ်တွေ သိပ်စိတ်ညစ်တယ်။
ညနေစောင်း ကလဲယားကွမ်း ၊ နစ်ကိုးလင်းတို့ကို မနက်က ကိုယ့်အတွေ့အကြုံအကြောင်း ထုံးစံအတိုင်း တရုတ်လိုနည်းနည်း အင်္ဂလိပ်လိုများများနဲ့ ပြောပြနေတာက...
ဒီနေ့ Pantry မှာ အမျိုးသမီးအသစ်တယောက်တွေ့လို့ နှုတ်ဆက်ကြတယ်...ဒီနေ့ ရထားနောက်ကျတယ့်အကြောင်း၊ ရာသီဥတုပူတယ့်အကြောင်း ဘလာ ဘလာ ပေါ့။ ငါ မေးလိုက်တယ်...
Nǐ shì xīn yuángōng .
Wǒ shì CEO .
မေရီလန်းရုံးထိုင်ပြီး ဒီစီရုံးကို တခါတလေမှ လာတတ်တယ့် စီအီးအိုကို အသစ်ဝင်တယ့်သူလားလို့ သွားမေးနေတာ စတူးပစ်လိုက်ပုံက။
ဟေ့ ရာမား..နင် ကား ဝယ်ရင် ဘာဝယ်မှာတုန်း...ဘီအမ်ထဗလျူလား...
(သူ့စီနီယာ ဘီအမ်ထဗလျူကား စီးပြီးကတည်းက ဘီအမ်ထဗလျူမှ ဘီအမ်ထဗလျူ ဖြစ်နေတယ့် ရာမား)
ဘီအမ်ထဗလျူက ဈေးကြီးတယ်..ငါက တိုရိုတာ ဟိုက်ဘရစ် လိုချင်နေတာ...လျှပ်စစ်နဲ့ မောင်းလို့ရတယ်...ဓာတ်ဆီနဲ့လည်း မောင်းလို့ရတယ်...ဂရင်းကားမို့လို့ တက်စ်ကလိမ်းလို့ ရတယ်...ငါ အမေ ဘွဲ့ယူဖို့လာရင် ကားစုတ်လေးနဲ့ မဖြစ်ပါဘူး....ကားအသစ်လေးနဲ့မှ မိုက်တာ...နင်ရော..
(စန်းထွန်း) ငါလား ကက်လက် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်...
(စန်းထွန်း) ကန်တက်ကီရုံးမှာတုန်းက ရုပ်ဆိုးဆိုး ကားဟောင်းကြီးကို ဘာကားလည်းလို့ အိမ်ရှင်အစ်မကိုမေးတော့ အဲဒါ ကက်လက်...လွန်ခဲ့တယ့် ဆယ်နှစ်လောက်တုန်းက အမေရိကန်တွေရဲ့ ဒရင်းကား...ကက်လက်လေးစီးပြီး စနေနေ့မှာ လျှောက်လည်ရရင် သေပျော်ပြီဆိုတယ့် သီချင်းလေးတောင် ရှိတယ်...တခါဝယ်ပြီးရင် တသက်လုံး အမုန်းဆုံးစီးပဲ ကားဘီးပဲ လဲရတယ်...
အိုင်တီဒါရိုက်တာ ဂရေ့စ်အိုးစ် ကက်လက်ဝယ်တယ်ဆိုလို့ ဂျရတ်က အိုး..ကက်လက် လို့ထအော်တယ့် အသံကို ကြားပြီးကတည်းက ကက်လက်ဖြစ်နေတာ...ကက်လက် မစီးဖူးသေးဘဲ ကက်လက် ဖြစ်နေတယ် ဆိုပါတော့...ဆူနမ် နင်ရော ဘာကားဝယ်မှာလဲ..
(ဆူနမ်) ငါလား...ဘာကားမှ မဝယ်ဘူး...ရာမားရဲ့ ကားအသစ်ကို မောင်းမယ်...
(စန်းထွန်း) ဟား..ဟား...ဂွတ် အိုင်ဒီယာ..
ဆူနမ်တို့အိမ်နားမှာ ပွဲဈေးရှိလို့ ညဖက်ပွဲဈေးလျှောက်ကြတယ်။ တပတ်လျှောက် စနည်းနာပြီးတော့ ပင်လယ်ဓားပြလှေ စီးကြတယ်။ မျက်စိမှိတ်ထားရင် မကြောက်ပေမယ့် ဖွင့်လိုက်ရင် လွင့်ထွက်သွားတော့မလို၊ တိုင်နဲ့ပဲ ဆောင့်မိတော့မလိုနဲ့ အော်လိုက်ကြတာ ဝက်ဝက်ကွဲ။
(အမ်းထရူး) သောက်ကျိုးနည်း ...ရှေ့က ဟိုက်စကူးကောင်လေးတွေ စီးတုန်းက ဘာသံမှ မထွက်ဘူး... နင်တို့အလှည့်ကျမှ အော်လိုက်ကြတာ...စီးတယ့်သူတွေအထဲမှာ နင်တို့ အအော်ဆုံး...ငါဖြင့် ရှက်လိုက်တာ... ဒီလိုဖြစ်မယ်ထင်လို့ ငါ နင်တို့ မထိုင်တာ...
(ဆူနမ်) အောင်မယ်...ဒီလောက်တောင် ရှက်နေရင် နောက်နေ့ နင် ငါတို့နဲ့ မလိုက်နဲ့...ငါတို့ဘာသာ သွားမယ်...
(ရာမား၊ စန်းထွန်း) အေးလေ...
(အမ်းထရူး) မဖြစ်သေးပါဘူးဟာ...တိုက်အောက်မှာ အမဲကောင် အမူးသမားတွေ တွေ့တယ်...နင်တို့ မိန်းကလေးတွေချည်းပဲ မဖြစ်သေးဘူး...ငါ ပါမှဖြစ်မှာပေါ့...
မှန်ပြတိုက်လိုမျိုး ဝင်ဖို့ စောင့်ကြည့်ကြတော့
ဟင်...ကလေးတွေချည်းပါလား...ငါတွေ့တာ အကြီးဆုံးဆိုလို့ ၁၀ နှစ်လောက်ပဲ ရှိတယ့် ကလေးမ။
အောင်မြင်စွာ ဆုတ်ခွာကြပြီး တိုက်ကားမောင်းကြလေသည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ကေအမ်ဒီမှာ အရင်တုန်းက အန်စီစီ ခု လန်ဒန်မက်ထရိုပိုလစ်တန်တက္ကသိုလ်က လာဖွင့်တယ့် အိုင်ဒီစီအက် ဆက်ရှင်း ၁၃ တက်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သွား ပင်လယ်ဓားပြလှေစီး၊ တိုက်ကားမောင်းကြတာ သတိရမိတယ်။
Buy one Get another 50% အွန်လိုင်းကနေ ဝယ်ထားတယ့် အရှည်ဒူးအထက် ဂါဝန်နှစ်ထည်ရောက်လာလို့ ဝတ်ကြည့်ရင်း ပေါင်လယ်လောက်အထိ မတင်ကာ ဒီလောက်တိုချင်တာဟု ညည်းတွားရင်း ရေချိုးခန်းမှန်မှာ သွားကြည့်နေတယ့် ရာမားကို ဆူနမ်နဲ့ အမ်းထရူး လှမ်းအော်ကြတယ်။ ဘာလဲတော့မသိ ဗီတိုးရီးယားစီးကရက် ( Victoria Secret ဘရာ၊ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ထုတ်လုပ်သော ကုမ္ဗဏီ) ဆိုတာတော့ ကြားလိုက်တယ်။
သိလား..စန်း...ရာမားက ဂါဝန်ကို ပေါင်ရင်းလောက် တိုချင်လို့တယ့်...အဲဒါ ငါနဲ့ဆူနမ် ဝိုင်းအော်နေတာ...အဲလောက် အတိုဝတ်ချင်ရင် ဘာမှမဝတ်နဲ့ ဗီတိုးရီးယားစီးကရက်ပဲ ဝတ်လို့..
ငါလည်း အတိုဝတ်ချင်တာ...ငါ့ခြေသလုံးက တုတ်တယ့်အပြင် စက်ဘီးမှောက်တယ့် ဒဏ်ရာ၊ သစ်ပင်ပေါ်က ပြုတ်ကျတယ့် ဒဏ်ရာတွေနဲ့ မလှလို့...ဆောင်းတွင်းဆို တကိုယ်လုံး အထပ်ထပ် ထုပ်ထားရတာ...နွေတုန်း ဝတ်ထား ရာမား...နင့် ခြေထောက်က လှတယ်...လှတယ့်အရာတွေကို ဖုံးမထားနဲ့...ဖေါ်သာဖေါ်... ဝတ်သာ ဝတ်...
ဟို အတိုကြိုက်တယ့် မမက ရုံးကို ဗစ်တိုးရီးယားစီးကရက် ဝတ်ပြီးသွား...
ဟို လှတယ်လို့မြှောက်ပေးတယ့် တယောက်လည်း ဘီကနီ ဝတ်ပြီးသွား...
ဟုတ်ကဲ့..ကျွှန်တော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲ ရှိတယ်။